तिथि मेरो पत्रु »6गर्मी तिथि विचार
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 25 2020 |2मिनेट पढ्न
यस गर्मी sizzle बनाउन – हाम्रो शीर्ष6मिति यो सिजन लागि विचार!
1. पैदल यात्रा जानुहोस्
त्यहाँ बाहिर प्राप्त र हेर्न अर्थ गरिएको छ सबैलाई स्थानहरू हेर्न. मात्र अनुसन्धान पैदल यात्रा तपाईंको स्वास्थ्य सुधार गर्ने रहेको छ, यो पनि साँच्चै आफ्नो मिति चिन्न समय र ठाउँ अनुमति दिन्छ. अधिक रोचक स्थान, कम अप्ठ्यारो चुपचाप तपाईं छौँ – सधैजसो त्यहाँ बारेमा कुरा गर्न केही हुनेछु!
2. जिम सँगै मारा
तपाईं एक फिटनेस कट्टर वा बाहिर सुरु हुनुहुन्छ कि छैन, जिम जाँदै सधैं एक जिम-मित्र संग धेरै रमाइलो छ. तपाईं र तपाईंको मिति प्रत्येक अन्य व्यक्तिगत प्रशिक्षक रूपमा कार्य गर्न सक्छ, र दुई को लागि आफ्नो बुट क्याम्पमा सिर्जना. यो तपाईं बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रेरित गर्न सही तरिका हो.
3. एक स्थानीय खेल घटना जानुहोस्
एक स्थानीय खेल जानुहोस् – सँगै. फोम औंलाहरु मिल्दो आफ्नो टीम मा मज्जा. भीड को वातावरण मा आफूलाई गुमाउन – को लहर गर्दै गर्दा रमाइलो गर्न गाह्रो छ! तपाईं साहसी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सधैं प्रयास र Jumbotron मा रोमान्टिक सन्देश प्राप्त गर्न सक्छन्.
4. दुई को लागि Campout
ती गर्मी सांझ को भन्दा बनाउन. त्यहाँ एक सस्तो छ, मजा (र पूर्ण रूपमा रोमान्टिक) मिति तपाईंको पिछवाडे मा सही प्रतीक्षा. पाल सेट अप, र एक ताराबाट गर्मी आकाश मुनि रोमान्टिक मिति रात snuggling आनन्द!
5. चिडियाखाना तिथि
चिडियाखाना एक यात्रा यो रचनात्मक मिति विचार संग तपाईंलाई बाहिर बच्चा ल्याउन पक्का छ! यति धेरै जनावर हेर्न, तपाईं कुनै पनि अप्ठ्यारो चुपचाप विदाई लहर गर्न सक्छन्. अगाडि बढ, तपाईं बस तिनीहरूलाई कस्तो जंगली आफ्नो मिति देखाउन!
6. बेरी उठाएर
गर्मी बाहिर प्राप्त र आफ्नो जामुन टिप्न सिद्ध समय छ, र यो पनि राम्रो मजा र अद्वितीय मिति विचार बनाउँछ. त्यसपछि एक मिठाई मिठाई व्यवहार ती जामुन बारी पछि घर आए.
5 Taboos डेटिंग तपाईं तोड र दूर चालू गर्नुपर्छ